Nbanye n'ime Cross Media Optimization | Martech Zone
E nwere ọtụtụ nnọkọ na Webtrends Na-eme 2009 Conference nke ahụ kwuru banyere ike nke ijikọ data na mmetụta dị mma ya na nsonaazụ azụmaahịa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-amalite site na nnwepụta datamart buru ibu wee weghachite azụ - na-anwa ime ka ihe niile daba na ụdị data ha. Ọ bụ usoro adịghị mma ebe ọ bụ na usoro na - agbanwe agbanwe mgbe niile… ị gaghị enwe ike mejuputa ya ebe ọ na-agbanwe ozugbo ọ kọwara.
Craig Macdonald, onye isi osote onye isi na onye isi ahịa ahịa nke Kovario, mere nyocha magburu onwe ya banyere otu esi abanye na Cross Marketing Optimization. Ihe ngosi na nnọkọ a kpọrọ New CMO: Ọkachamara Mgbasa Ozi Obe. Craig abanyeghi n'uju banyere ọwa ọ bụla na usoro ahụ, yabụ m ga-anwa ịnye nkọwa zuru ezu na nghọta m banyere usoro ahụ.
Usoro a na - ebugharị site na obere rue nnukwu kama ọ ga - eme nke ọzọ. A na-ekewa data ndị ahịa na ụlọ ọrụ n'ofe ọwa, usoro, usoro, wdg. Integgbakwunye data ndị ahịa n'ime datamart chọrọ ka ntinye data nchekwa ahụ dị gara gara to dị ka iwuli spain. Ọwa ọ bụla bụ diski. A na-ejikọta disks ahụ na spain. Mgbe ọkpụkpụ azụ dị, enwere ike ịgbakwunye ọkpụkpụ, mgbe ahụ anụ na ọkpụkpụ, karịa anụ ahụ na anụ, wdg. Nnukwu ihe atụ, amaara m… mana ọ na-arụ ọrụ.
Kọwa usoro n'ime ọwa ọ bụla bụ nzọụkwụ mbụ. Otu ihe atụ nke usoro ọwa bụ usoro nke atụmanya na-ewe n'ịntanetị site na ịchọta azụmaahịa gị na ịtụgharị, Ọwa Njin Injin. Ikekwe ha na-amalite site na nyocha ọchụchọ, wee daa na ibe, wee pịa iji tinye ihe na ụgbọ ibu azụmahịa, mgbe ahụ nchịkọta nchịkọta, wee peeji nke ntụgharị. Ọ bụ ihe dị mkpa iji ghọta ihe igwe nchọ ha hụrụ na…
Kedu isiokwu ndị ha chọrọ?
Kedu ebe ọdịda ya dabere na isiokwu ndị ahụ?
Kedu ihe ha pịrị iji tinye ihe ahụ na ụgbọ ibu azụmahịa?
Ha gbanwere ma ọ bụ gbahapụ?
Nchọgharị, Sistemụ nrụọrụ, Adreesị IP, wdg?
Mpempe data ndị a niile dị oke mkpa n'ịtụle olulu gị ka ị nwee ike ịchọta ụzọ dị irè na adịghị arụ ọrụ nke ụzọ ọ bụla. Ihe ọ bụla ma ọ bụ mpempe data meta ị nwere ike ijide banyere njem ndị ahịa dị mkpa ka ị weghara ihe niile, n'agbanyeghị agbanyeghị ntakịrị. Ozugbo data dị, njikarịcha nke ọwa dị mfe.
Ozugbo akọwapụtara usoro ọ bụla akọwapụtara, weghaara ma kachasị mma, mkpokọta data bụ nzọụkwụ ọzọ. Icheta data na-enye ụlọ ọrụ ohere iji ugbu a tụnyere ọwa, ịdị irè ha, ma nke kachasị mkpa, otu otu ọwa si emetụta nke ọzọ. You na-eri nri gị site na itinye ego na ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa isiokwu ndị ị na-emeri? Usoro nzụta gị (dị ọnụ ala) na-eme ka ndị mmadụ (dị oke ọnụ) kpọọ ụlọ ọrụ gị kama?
Mgbasa ozi mgbasa ozi dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị chọrọ ịkwụsị ụgwọ ma laghachi elu. Ọ bụ mgbalị siri ike nke nwere ike iwe ọtụtụ afọ (ma gbanwee mgbe niile), mana ozugbo iberibe ahụ dị, a ga-eji obi ike mee mkpebi. Ọ bụghị naanị atụmatụ maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ, ndị a nwere ike ịdị mkpa maka obere azụmaahịa.
Craig kwuru na ụlọ ọrụ na-egbutu akụ na ụba dị mkpa iji nweta uru dị ukwuu na njikarịcha mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọ kwenyere na ~ 10% nke mmefu ahịa gị / IT ga-ejikọ ya na nyocha na njikarịcha. Nke ahụ bụ ọgwụ siri ike ilo ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwado ụgwọ ahụ na nloghachi na itinye ego. Enweghị m obi abụọ na nke ahụ ga-ekwe omume, echere m na ọ bụ okwu ọkụkọ ma ọ bụ akwa. Kedu ka ị ga-esi gosi 10% ma ọ bụrụ na ịmebeghị ya. Kedu ka ị ga - esi mee ya belụsọ ma i wepu 10%?
Ikekwe ije ije na ntinye ego ka ị na-abanye n'ime usoro ahụ bụ isi. Njikarịcha nke otu ọwa nwere ike inye gị nloghachi dị mkpa iji gbasaa ndị ọrụ na akụrụngwa gị.
Tags: obe ọwa njikarịchaahia ọwa
Njikwa ngosi na Radian6
Hụ na ntụnyere Doug ahụ, adịchaghị njọ ma ọlị, ụzọ dị mma iji chee echiche banyere usoro dabara adaba, na mgbanwe. Ekwenyere m na ọ na-arụ ọrụ nke ọma. M na-eche otú ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eche n'ezie banyere nsogbu ndị dị ka nke a ugbu a na akụ na ụba ugbu a? Ha kwesiri ibu, mana n'ihi otutu ihe mere m ji chee na ha adighi elebara anya na nke a dika ha kwesiri. Nwee mmasị maka ndị ọzọ na-agụ akwụkwọ ka ha tinye aka n'omume gbasara ịnabata ezigbo mgbasa ozi mgbasa ozi? Ọmarịcha post, echiche na-akpali iche echiche.
Daalụ Chris! Jaa gị n'anya ịkwụsị. Ọ ga-amasị m ịnụ site na ndị ahịa ndị ọzọ! Enwere ihe omuma atu ole na ole na ogbako a - obuna tinyere ndi ozo di iche dika igwe onyonyo na akwukwo. Ọ na-ewe obere ọrụ iji weghara mgbanwe ndị ahụ… ma ọ bụ nọmba 1-800 omenala, koodu ego eji eme ihe, ma ọ bụ na-enweghị ike ịdabere na ndị ahịa.
Ihe ọ bụla azụmahịa nwere ike ime iji soro na-eduga n'ihu bụkwa isi ihe na atụmatụ ahụ.